उत्तर कोरिया बारे ९ रोचक तथ्य | Rochak Khabar
उत्तर कोरिया बारे ९ रोचक तथ्य admin
उत्तर कोरियामा धेरैजसो स्थान बाँझो छ । त्यसकारण त्यहाँका मानिसहरुको दिसालाई मलको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यद्यपी, यहाँ गैरकानुनी रुपमा मानिसको दिसा बेचिन्छ ।
थुप्रै मानिसहरु अर्को देश जान चाहन्छन्ः
उत्तर कोरियामा मानिसहरु तीनवटा जातमा बाँडिएका छन् । होस्टाइल्स, वेवरिंग र कोरका मानिसहरुलाई भिन्न भिन्न व्यवहार गरिन्छ ।
जाडो महिनामा पूर्ण रुपमा बिजुली बन्दः
उत्तर कोरिया बाहिरबाट हतियार माग्ने र पठाउने विषयमा निकै अगाडि छ । सन् २०१२ मा युएनले उत्तर कोरियाबाट सिरिया जाँदै गरेको मिसाइल्स बनाउन प्रयोग हुने सिलिन्डर जफत गरेको थियो ।
ढल्दै छ अर्थव्यवस्थाः
उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र दिन दिनै ढल्दै गइरहेको छ । यहाँ इन्स्योरेन्स फ्रडको विभिन्न घटना सार्वजनिक भएका छन् 8.
मेरो श्रीमान मसँग दिनकै तीन-चारचोटिसम्म सेक्स गर्नुहुन्छ तर ...? 3,395